Hanao Lisitra Mainty Ireo Tranonkala ‘Manimba Ny Fiandrianany i Okraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2017 5:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Ελληνικά, русский, Italiano, Español, English
Famoriam-bahoaka ho fanohanana ny Novorossiya tao Moskoa tamin'ny 11 Jona 2014. Loharanon-tsary: Artem Tkachenko, CC BY-SA 3.0.
Manomana ny lisitr'ireo tranonkala “manimba ny fiandrianam-pirenena Okrainiana” ny Minisiteran'ny Politika Fampahalalam-baovao ao Okraina, izany dia tafiditra ao anatin'ny ezaka hanohanana ny tetikady fiarovan-torohay vaovao ao amin'ny firenena izay nataon'ny ny filoha Petro Poroshenko sonia tamin'ny 25 Febroary .
Nilaza ny Minisitry ny Politika Fampahalalam-baovao Yuriy Stets tao amin'ny fanambarana an-gazety tamin'ny 2 Martsa fa “ao anatin'ny tapa-bolana, ilaiko ny hanoloran'ny [Minisitra lefitra Dmitry Zolotukhin] amin'ny vaomieran'ny manam-pahaizana manokana ao amin'ny Minisiteran'ny Politika Fampahalalam-baovao, ahitana manam-pahaizana momba ny fampitam-baovao sy mpiasam-panjakana, ny lisitr'ireo tranonkala tokony ho sakanana. “
Sary famantarana ny Minisiteran'ny Politika Fampahalalam-baovao ao Okraina
Toa mikendry ny fanapariahana ny vaovaon'ny mpomba ny mpisintaka sy ny pro-Rosiana ilay politika: araka ny fanambarana navoakan'ny Fitantanan-draharahan'ny Filoham-pirenena, nampidirina ilay politika “voalohany indrindra mba hijerena ny fanoherana ny fiantraikan'ny vaovao manimba avy ao Rosia izay mety hiteraka ady roa sosona. “
Nilaza i Stets fa samy tafiditra ao anatin'ny lisitra mainty avokoa ny tranonkala toy ny Lohataona Rosiana sy ny Novorossiya izay mifandray amin'ny mpanohana ny hetsiky ny mpomba Rosiana nipoaka tao Okraina tamin'ny lohataonan'ny taona 2014 sy ny fanjakana mpisintaka an-tsaina any amin'ny faritra atsinanana sy atsimon'i Okraina.
Tsy ny Minisiteran'ny Politika Fampahalalam-baovao irery ihany no tompon'andraikitra amin'ny fanakanana ny tranonkala, na izany aza. Nilaza i Stets fa hamakafaka ny soso-kevitry ny minisiterany ny Sampam-piarovana ao Okraina (SBU) sy ny filankevitry ny manam-pahaizana manokana, na dia tsy mbola misy aza amin'izao fotoana izao ny fifanarahana. “Hahita rafitra hanakanana azy ireo tsy ho ela isika,” hoy Stets.
Nanome soso-kevitra ny Stets fa hanangona vaovao momba ny tranonkala izay tokony ho sakanana ny minisiterany, ary avy eo hanolotra izany any amin'ny fitsarana handraisana fanapahan-kevitra ofisialy sady nanantitrantitra izy fa tsy hiasa ho mpanao sivana avy amin'ny fanjakana ny filankevitry ny manam-pahaizana izay hamerina hijery indray ireo tranonkala tokony ho sakanana .
Nandrisika ny Minisiteran'ny Politika Fampahalalam-baovao mba hanaraha-maso ny haino aman-jery sy ny aterineto ny tetikady fiarovan-torohay vaovao ao Okraina mba hamantarana vaovao hita fa tsy ara-dalàna, anisan'izany ireo mampidi-doza amin'ny fiarovam-pirenena ao an-toerana.